बिमा कम्पनीहरुको गुणात्मक वृद्धि हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड::Nepal Online News Portal
काठमाडौं । जोखिम न्यूनीकरणका लागि जीवन तथा निर्जीवन बीमा गर्ने कम्पनीहरु आफैं असुरक्षित हुने गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुको संख्यात्मक वृद्धि भएपनि गुणात्मक वृद्धि हुन नसकेको जिकिर गर्दै डा. खतिवडाले अब कम्पनीहरुले दीर्घकालीन योजनासहित टिक्नेगरी अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
‘आजभोलि बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरु जस्तै बीमा कम्पनीहरुको दायरा समेत फराकिलो हुँदै गएको छ । अब बीमा कम्पनीको नियामक निकाय बीमा समिति सक्रिय हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘बजारमा व्यापक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । कमाउनकै लागि बिमा कम्पनीहरु आफ्नो सीमा नाघेर काम गरिरहेका छन् । चाहिने भन्दा बढी स्किमहरु विज्ञापन गरिरहेका छन् । यसले सेवाग्राही प्रताडित छन् ।’
उनले आफूलाई केके र कुनकुन खालको जोखिमको सुरक्षण चाहिएको अब बिमित पनि स्पष्ट हुनुपर्ने अतिवडाले बताए । अन्यथा जोखिम सुरक्षणका लागि बीमा गरिएपनि उल्टै असुरक्षित बन्ने खतरा बढ्नसक्ने तर्फ उनले सचेत गराए ।
खुल्ला बजार र खुल्ला अर्थतन्त्रकै कारण नीजि कम्पनीहरुले सहजै लाईसेन्स पाएको तर कारोबार भने प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
२०७५ साल असार मसान्तसम्म निर्जीवन बिमाले १ अर्ब रुपैयाँ र जीवन बिमाले २ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने भनिएको थियो । सोही निर्देशिकामा तीन—तीन महिना गरेर २ पटक थप समय दिनसक्ने प्रावधान समेत राखिएको थियो । जुन २०७५ पुस मसान्त हो । अहिले यो समयसिमा समेत सकिएको छ । अहिलेसम्म पनि अधिकांश बिमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिका लागि काम गरेका छैनन् ।